Home Wararka (Xog) Khiyaanada ee dowladaha Somaliya & Kenya
(Xog) Khiyaanada [Xasan Kheyre & Aadan Daa’uud] ee dowladaha Somaliya & Kenya
Maadaama ayan jirin cid la xisaabtameyso Xasan Cali Kheyre oo isaga kaliya uu lahaa go’aanada la xiriira ku tagri falka dhaqaalaha xafiiska Ra’iisal Wasaaraha, waxa uu mushaar joogta ah u qoray Qareenka Aadan Daa’uud. Sida MOL ay u xaqiijiyeen labo qof oo kamida howlwadeenadii ka shaqeyn jiray xafiiska Xasan Kheyre. Mushaarka ayaa lagu bixin jiray magaca shaqsi kale, lacagta waxaa loo soo marin jiray walalkiis.
MOL uma suuragalin in ay hesho cadadka lacagta uu Qareen Aadan Daa’ud sida dadban uga qaadan jiray xafiiska Ra’iisal Wasaaraha. Xasan Kheyre iyo Aadan Daa’uud ayaa aad uga taxadaray in la ogaado cadadka lacagta la bixiyo dhowr sababood awgood. 1) Hadii lacagtaas lagu cadeeyo in Aadan Daa’uud uu ka qaadan jiray Xafiis Dowlad Soomaaliyeed, waxa laga rabaa in uu la socodsiiyo dowlada Kenya si uu canshuur uga bixiyo, 2) Xasan Kheyre oo aan marnaba doonaynin in la ogoaado bixinta lacagta uu siiyo saaxiibkiis.
Sida uu Aadan Daa’uud u xaqiijiyay saaxibadiisa gaarka ah, isaga oo istcimaalayo lacag fara badan waxa uu ku guulaystay in uu kulan gaar ah u qabto Xasan Kheyre, kaas oo ay ka soo qaybgaleen 12 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka dalka Kenya. MOL waxa loo xaqiijiyay in xildhibaanadaas intooda badan la siiyay lacag si ay u yimaadaan shirkaas. Lacagta ku baxday shirarka inta uu Kheyre joogay Nairobi waxa si wadajira u maamulaayay Aadan Daa’uud iyo Maxamed Cabdkarin Gaanbe oo ehel la ah Xasan Kheyre.
Peter Kagwanja oo ah shaqsi aan qarsanin xiriirka kala dhaxeeya Aadan Daa’uud iyo Xasan Kheyre ayaa dhowr mar wareeysiyo uu siiyay taleefishinada dalka Kenya ku sheegay taageerada uu u hayo Xasan Kheyre iyo damaciisa uu doonayo in uu dalka Soomaaliya uu kheyraadkiisa isaga wax ka maamulo. Halkaan ka daawo wareeysiyada Peter Kagwanja:
iyo halkaan hoose
Aadan Daauud iyo Xasan Kheyre ayaa u muuqda in ay ku heshiiyeen in si buuxda loo xaraasho kheyraadka dalka iyo dadka. Sida ay ilo xog’ogaal ah u xaqiijiyeen MOL, Waxaa jira qorshooyin la doonayo in lagu dhaco Kheyraadka dalka, gaar ahaan xaraashka guud ee Kheyraadka dalka.
Waxa aanu qormooyinka soo socda idinkuugu soo gudbin doonaa qaabki iyo isku daygii ay labadaa nin sameeyeen si loo iibsado karaamada Umadda Soomaaliyeed, lacagaha la isku dayay in lagu iibsado hay’adaha kala duwan ee dalka Kenya iyo doorka Aadan Daa’uud ku leeyahay qorshooyinkaas. La soco dhawaan.